Muungaab oo kormeeray wadada 1-aad ee Bakaaraha oo laami cusub la saaray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” oo ay wehliyaan xubno ka tirsan maamulka gobalka iyo mas’uuliyiin kale ayaa maanta kormeeray waddada isku xirta Isgoysada Baar Ubax iyo Howlwadaag, halkaasi oo dhawaan la saaray laami cusub.
Ujeedka kormeerka Guddoomiyaha Gobolka ee wadadaas ayaa aheyd inuu soo indha-indheeyo qaabka loo dhisay wadada oo isagu markii la bilaabayey 1-dii bihsoo hore ee Febaraayo uu xariga ka jaray.
Guddoomiyaha Degmada Howlwadaag, Axmed Nuur Cabdi Siyaad oo la hadlay Wabraahinta ayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubnihii la socday uga warbixiyay xaaladda suuqa Bakaaraha iyo dhismaha waddadasi, isagoo ganacsatada ka dalbaday inay bixiyaan canshuurta.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir, Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” ayaa sheegay in Dowladda Hoose ee Xamar oo kaashanaysa ganacsatada Suuqa Bakaaraha ay ku guuleysteen in waddo 1-km ah oo dhexmarto Suuqaasi ay laami saaraan.
“Tani waxa ay muujineysaa in aan nahay dad wax qabsan kara, waxaan markale ku celinayaa baaqii ahaa “Dhiso Dalkaaga” oo uu horey Madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay” ayuu yiri Guddoomiye Muungaab.
Wadada isku xirta Isgosyada Baar Ubax iyo Howlwadaag oo burubur ba’ani gaaray sanaidiihii colaadda sokeeye ayaa haataan dib loo shisay, waxaase meesha ka maqan nadaafadda, oo wadadii hadda la dhisay waxaa sii qarinaya qashin iyo bacaad.
Xildhibaan Kenyan ah oo wadahadal ugu baaqay Alshabaab